Home - Parami Gas
Parami Gas is Myanmar's first Branded Cooking Gas for families. Brand New Cylinders with secured caps help families to enjoy safe and quality cooking. Just Call 8484 and Parami Gas will be delivered to your kitchen.
Why Choose Parami Gas?
အသစ်စက်စက် ပါရမီGas အိုးများကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေနဲ့အညီ Safety ကိုဦးစားပေးထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် မိသားစုတိုင်းအတွက် လှပပြီး အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ မီးဖိုဆောင်ဖြစ်စေမှာပါ။
ပါရမီ Gas အိုးများကို စက်ရုံတိုက်ရိုက်အရည်ဖြည့်တာဖြစ်လို့ အရည်ပြည့်ဝတဲ့အပြင် တစ်ခါသုံး Seal cap ပါဝင်ပါတယ်။
မှတ်မိလွယ်တဲ့ ဖုန်းနံပါတ် ချစ်လေးချစ်လေး(၈၄၈၄) ကိုဖုန်းဆက်လိုက်တာနဲ့ အိမ်အရောက် ပါရမီ Gas အိုးများကိုရေသန့်ဘူးလဲသလိုလဲပြီးလွယ်ကူလျင်မြန်စွာပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။
5 Kg cylinder+Rinnai 511 Single stove
5kg(၃ပိဿ) gas အိုးနဲ့တစ်ဖိုချက် Rinnai မီးဖိုအတွဲလေးပါ။ ပိုက်၊ ကလစ် ၊ Regulator ပါပြီးသားအစုံလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
12.5Kg cylinder+Rinnai 511 Single stove
12.5kg cylinder+Namilux Single stove
12.5kg(7.5 ပိဿ) gas အိုးနဲ့တစ်ဖိုချက် Namilux မီးဖိုအတွဲလေးပါ။ ပိုက်၊ ကလစ် ၊ Regulator ပါပြီးသားအစုံလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
5kg cylinder+Namilux Single stove
5kg(၃ ပိဿ) gas အိုးနဲ့တစ်ဖိုချက် Namilux မီးဖိုအတွဲလေးပါ။ ပိုက်၊ ကလစ် ၊ Regulator ပါပြီးသားအစုံလိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
Questions about the specifics of the services provision, products, delivery, and similar issues.
မီးဖိုရှိပြီးသားမို့ အိုးနဲ့ အရည်ပဲ ဝယ်လို့ရလား?
ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်ရှင်ဒါပေမယ့် regulator လေးတော့ ဝယ်ပေးရပါတယ်ရှင်တခြားအိုးခေါင်းတွေနဲ့ မတူတဲ့ Socket type regulator design မို့လို့ပါရှင်
ရန်ကုန်မြို့တွင်းဆိုအိမ်အရောက် ပို့ခ အခမဲ့နဲ့ ပို့ပေးတဲ့အပြင်တခါထဲ တပ်ဆင်ပေးခဲ့မှာပါရှင်
ရေဘူးလဲသလို အိုးချင်းချိန်းပြီး လာလဲပေးမှာပါရှင်
Hnin Wai Wai Phyo
Nan Htet Htet
ဝန်ဆောင်မှု အရမ်းကောင်းပါတယ် လိုနေတဲ့အချိန် ချက်ချင်းအရောက်လာပေးပြီး ဖုန်းဆက်မေးလဲ စိတ်ရှည်လက်ရှည် ဖြေပေးပါတယ် gasအလေးချိန်ကလဲ အပြည့်ပါတာမို့ ပေးရတဲ့စျေးနဲ့ တန် အသုံးလဲခံတယ် ထမင်းကို ပေါင်းအိုးနဲ့ မချက်ဘဲ gasနဲ့ ပဲ ချက်ကြည့်တော့ လဲ အဆင်ပြေနေပြန်ရော🤩 Thanks Parami gas🤩
ပထမဆုံး သော preminum brand အရမ်းကြိုက်